Vaovao - ahoana ny fiasan'ny solenoid flameout
Paompy tsindrona Diesel
Ahoana ny fiasan'ny solenoid flameout
Rehefa maty ny motera diesel dia misy coil ao amin'ny valva solenoid izay mitovy amin'ny mpamokatra.Rehefa mandeha ny herinaratra dia avoaka ny hery andriamby mba hisintonana ny fiatoana hiverina amin'ny solika.Rehefa tapaka ny herinaratra dia tsy misy hery andriamby.menaka izy io.Taorian'ny fampiasana ny valva solenoid flameout nandritra ny fotoana ela, ny piston dia mora voasakana amin'ny vovoka sy ny fotaka ary tsy afaka mihetsika, ary avy eo dia tsy afaka manomboka na flameout.
Tandremo ny fametrahana valva solenoid:
1. Rehefa mametraka, tandremo tsara fa ny zana-tsipìka eo amin'ny vata fampangatsiahana dia tokony hifanaraka amin'ny fikorianan'ny tari-dalana.Aza apetraka amin'ny toerana misy rano mitete na mitete mivantana.Ny valva solenoid dia tokony hapetraka mitsangana miakatra;
2. Ny valva solenoid dia tokony ho azo antoka fa miasa ara-dalàna ao anatin'ny 15% -10% ny fiovaovan'ny salan'isa naoty amin'ny famatsiana herinaratra;
3. Aorian'ny fametrahana ny valva solenoid, dia tsy tokony hisy ny tsy fitovian'ny tsindry amin'ny fantsona.Ary mila asiana angovo imbetsaka izy io mba hahatonga azy ho sahaza amin'ny hafanana vao azo ampiasaina;
4. Ny fantsona dia tokony hodiovina tsara alohan'ny fametrahana ny valva solenoid.Ny fitaovana dia tokony ho tsy misy loto.Mametraka sivana alohan'ny valva;
5. Rehefa tsy mahomby na voadio ny valva solenoid, mba hiantohana ny fitohizan'ny rafitra dia tokony hapetraka ny fitaovana bypass.
Ny kalitaon'ny entana dia ankatoavin'ny Alemana & Etazonia
© Copyrightjiujiujiayi: Zo rehetra voatokana.